Maraykanka oo Maxkamadaynaya dad ay u qabqabatay in ay xiriir leeyihiin Daalibaan Pakistan. – SBC
Maraykanka oo Maxkamadaynaya dad ay u qabqabatay in ay xiriir leeyihiin Daalibaan Pakistan.
Dowlada Maraykanka ayaa Maxkamadaynaysa dad ay u qabqabatay in ay xiriir la leeyihiin Daalibaanka Paksitan,gaar ahaana ku caawin jiray dhaqaale sida Saraakiil ka tirsan Dowlada Maraykanka ay sheegeen.
Sadex qof oo u dhashay wadanka Maraykanka ayaa kamid ah dadk ay Dowlada u qabatay xiriirka ay la leeyihiin Daalibaanka,waxaana Labo kamid ah ay Imaamo ka yihiin masaajido ku yaal gobolka Florida ee wadankaasi Maraykanka.
Baaritaano ay Ciidamada booliska FBI-da Maraykanku mudo ku hayeen dadka la xirxiray ayaa keentay in tuhunkooda la sheego in lagu maxkamadaynayo.
Warkan ayaa imaanaya Xili Daalibaanka Pakistan ay sheegteen in ay ka dambeeyeen Labo qarax oo lala beegsaday xarun tababar oo ay leeyihiin Ciidamada dalka Pakstan,waxaana qaraxyadaasi ku dhintay in ka badan 80 qof.
Sidoo kale waxaa ay imaanaysaa qabqabshada dadkan xili baarlamaanka Dalka Pakistan uu cambaareeyay howl galkii ay Dowlada Maraykanka ka fulisay Magaalada Abbotabad,gaar ahaana lagu dilay ogaamiyihiii Al qacida Sheekh Usama Bin ladin.
Pakistan ayaa haatan u muuqata mid indhaha caalamku uu kusii jeedo,iyadoona inta badan Maraykanku baaritaanadiisa ku aadan la dagaalanka waxa uu ugu yeero Argagixisada uu ka fulinayo banaanka Pakistan iyo weliba gudaha dalkaasi.